Maxay tahay sababta uu u guursan la'yahay jilaaga caanka ah ee Salman Khan? - BBC News Somali
Xigashada Sawirka, Salman Khan
Jilaa aan waligii guursan
Salman Khan oo ay da'diisu tahay 53 sano, loogana bartay aflaanta Hindiga ee jaceylka iyo dagaalka ku saleysan ayaa su'aasha ugu badan ee la weydiiyay noolashiisa waxaa la sheegay inay ahayd sababta uu u guursan waayay, waxana marar badan su'aashaas weydiiyay warbaahinta dalka Hindiya oo in muddo ah doonayay inay ogaadaan waxa jilaagan ku kalifay in uusan ku dhiiranin in uu guursado.
Salman Khan oo dhowr jeer la weydiiyay sababta uu u guursan la'yahay ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay, isagoona horay u sheegay in sababta uu u guursan la'yahay ay tahay dhaqaalaha guurka ku baxa oo ka badan intii ay ku guursan jireen dadkii hore.
Hase ahaatee, jawaabtaas ayey dad badan ay u arkeen in Salman uu isaga jeedinayo indaha shacabka iyo taageerayaashiisa, maadaama jilaaga uu kamid yahay jillayaasha ugu hantida badan dalkaas, ayna jirin sabab ku kalifi karta in dhaqaale la'aan uu u guursan waayo.
Salman Khan iyo Katrina Kaif aya mar lagu xaman jiray inay xiriir leeyihiin
"Salman waxaa aad loogu yaqaanaa qadarinta uu u hayo qoyskiisa, dhowr jeer oo hore oo uu isku dayay in uu guursado waxa ay la noqon weyday in fursad la noolaasho uu siiyo qofkale oo aan ahayn qoyskiisa, taasi na ay tahay sababta uu u guursan la'yahay", sidaas waxaa qaar kamid ah warbaahinbta Hindiya u sheegay qof kamid ah qoyska Salman Khan.
Sanadihii dambe waxa soo baxay warar aan la xaqiijin oo sheeegaya in Salman khan uu doonayo in uu guursado gabdho ay kamid yihiin Katrina Kaif iyo Iulia Vantur, balse wararkaas ayaa noqday kuwa xan ah oo kaliya oo aysan waxba ka suurtagelin, waxaana qoyska Salman Khan la sheegay in mar walba ay ku booriyaan in uu guursado, balse isaga uu go'aankaas qaatay.
"Qoyskiisa waxay mar walba doonayeen in Salman Khan uu guursado qaar kamid ah gabdhaha ugu caansan dalkaas, balse dantiisa shakhsiga wuxuu mar walba ka hor mariya tan qoyskiisa oo wuxuu jecel yahay in uu la noolaado qoyskiisa, ayna noqdaan qoys boqortooyo ah."Ayuu raaciyay.
Salman Khan oo dad badan ay u arkaan in uu sii duqoobayo marka la eego da'diisa ayaanan wax reer ah yeelanin waligii, arrintan oo dad badan ay la fajaceen maadaama qaar kamid ah caruurta jilayaashii ay isku wakhtiga ahaayen Salman ay durba kusoo biireen jilista aflaanta.
Qaar ka mid ah hay'adaha falanqeeya arrimaha filimada ayaa Salmaan Khan ku tilmaamay inuu yahay jilaagii ugu wanaagsanaa ee abid soo maray dunida, inkastoo kuwo kale ay dood ka keeneen arrintaas, ayna barbar dhigeen jilaaga kale ee lagu magacaabo Shakrukh Khan.
Itoobbiya: "Waxbo iskama badelin mowqifkeenna Soomaaliya ku aaddan"
Maroodi lagu arkay xaalad dhif iyo naadir ah
Fahad Yaasiin : Waxaa is guursaday haweenay Alshabaab xubin ka ah iyo Sarkaal NISA ah